काठमाडाैंको याै'न व्याव'साय क'ति छ १ रात'को रेट - Muldhar Post
काठमाडाैंको याै’न व्याव’साय क’ति छ १ रात’को रेट
पत्रपत्रिका खबर २०७६, १३ भाद्र शुक्रबार 564 पटक हेरिएको
सुन्धारा जाने बाटोमा भएका दुई आकाशेपुलमा मानिसको भीड अत्यधिक थियो। त्रिपुरेश्वरपट्टिको पुलमा फुटपाथ पसलेहरू इयरफोन र मोबाइलका ग्लासजस्ता सामान फिँजाएर बसेका थिए। पुलमा पाँचछ जना युवती यताउता गरिरहेका थिए। केहीले सलले मुख छोपेका थिए भने केहीले मास्क लगाएका थिए। एक युवतीले जिन्स पाइन्टमा क्रप टिसर्ट लगाएकी थिइन्। अर्की एक जनाले स्कर्ट र सेतो सर्ट लगाएकी थिइन्। पुलमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका उनीहरू पुलमा अडेस लागेर बसेका पुरुषको नजिक जाँदै कुराकानी गरिरहेका थिए।
एक जना पुरुषसँग उनीहरूले के कुरा गरिरहेका छन् भनेर चासो राखियो, ‘यिनीहरू को हुन्? तपाईंलाई के भने?’ अकमकाएर उनले भने, ‘केही होइन। ‘जाने हो’ भनेर सोध्दै थिए।’पुलको छेउमा आड लागेर बसिरहेका ती दुई युवतीसँग ग्राहक बनेर सोधियो– ‘कति हो नि रेट?’ १५ सय,’ एउटीले भनिन्। एक रातको? अनि कहाँ जाने? हाम्रोमा कि तपाईंकोमा?’‘एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय। जाने भए हाम्रैमा जाने हो।’‘प्रहरीको डर हुँदैन?’नजिकै हो। यही धरहरा भत्किएको पछाडि। कोठा हो आफ्नै। कसैले केही गर्दैन।’हामीलाई लुट्नुभयो भने नि?’
सोही दिन स्थानः रत्नपार्क, महानगरीय प्रहरी वृत्तनजिकै समयः साँझ ८ बजे महानगरीय प्रहरी वृत्तनजिकैको काशेपुलमा चार जना पुरुष गफिँदै उभिइरहेका थिए। उनीहरू सबै २५–३० वर्षका देखिन्थे। पुलमा छिटफुट मानिस हिँडिरहेका थिए। केही समयपछि उनीहरू भएको ठाउँमा दुई युवती देखापरे। उनीहरूमध्ये एकले सर्ट र स्कर्ट लगाएकी थिइन्। अर्की एक जनाले सर्ट–प्यान्ट लगाएकी थिइन्। एक जनाको हातमा गाढा नीलो रङको ब्याग झुण्डिरहेको थियो। उनीहरू त्यहाँका पुरुषहरूसँग गफिन थाले। एक युवतीले ब्यागबाट चुरोट झिकेर सल्काइन्। केही नजिक पुगेपछि उनीहरूको कुरा सुनियो। उनीहरू रात कहाँ बिताउने भन्नेबारे कुराकानी गरिरहेका थिए।
एक जना पुरुष सोधिरहेका थिए– ‘यहीँ बागबजारको गेस्टहाउसमा जाम्। तिमीहरूका अरू साथी छन् भने पनि बोलाऊ।’उनीहरूको कुराकानी सुन्दा कति पैसामा जाने भन्ने रेट अगाडि नै तय भइसकेको लाग्थ्यो। एक युवतीले भनिन्,‘गेस्टहाउसमा डर हुन्छ। हामी बस्ने होस्टेलमा जाऊँ। त्यहाँ अरू केटीहरू पनि छन्।‘उनीहरूको रेट कति हो नि?’ एक युवकले सोधे।‘सबैको एउटै हो। एक पटकको २५ सय। छिटो भन्नुस्, जाने कि नजाने?’ एक युवतीले भनिन्। जाने हो,’ ती युवाले भने‘तर, होस्टेल कहाँ नि?’‘बुद्धनगर,’ महिलाले जवाफ फर्काइन्।
दुई युवाले आ–आफ्ना पर्सबाट निकालेर पाँच हजार रुपैयाँ युवतीको हातमा राख्दै भने, ‘अरू होस्टेल पुगेर काम भएपछि दिउँला।’ त्यहाँबाट छ जनाको टोली बागबजारतिर लाग्यो। साउन ३० गते, बिहीबार स्थानः नयाँ बसपार्क, गोंगबु समयः साँझ ४ बजे सिमसिम पानी परिरहेको थियो। आकाशेपुलको देब्रेपट्टि सामुखुसीतर्फको मुखमा केही मानिस थिए। उनीहरूलाई केही युवा ‘दाइ होटल हो? दाइ, गेस्ट हाउस जाने हो?’ भन्दै सोधिरहेका थिए। एक जना युवा भने ‘केटी मिलाइदिने’ कुरा गरिरहेका थिए। उनी आकाशेपुलमा उभिएका तीनचार जनाको समूहलाई भनिरहेका थिए, ‘१२ सय मात्र हो। भनेको जस्तो केटी पाइन्छ। त्यहाँ केटीको लाइन हुन्छ। गएर आफूलाई मन परेकी केटी छान्ने हो।’
छातामुनि बार्गेनिङ-आकाशेपुलमा मानिसको आवतजावत थियो। केही भने लामो समयसम्म पुलमा यताउता गरिरहेका देखिन्थे। पाँचछ जना छाता ओढेका महिला पनि पुलको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म हिँडिरहेका थिए। कसैले मास्क लगाएका थिए भने कसैले सलले मुख छोपेका थिए। पुलमा यताउति गरिरहेका मानिसहरूसँग उनीहरू कुम ठोक्याउँदै हिँडिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा एक जना युवती एक जना पुरुषसँग आएर टाँसिइन्। उनले रातो रङको टिसर्ट, सेतो आउटर र कालो रङको प्यान्ट लगाएकी थिइन्। उनी तेस्रोलिंगी रहिछिन्। केही बेर ती पुरुषसँग कुरा गरेपछि त्यहाँबाट हिँडिन्।
ग्राहक खोजिरहेका यौनकर्मीहरू बेला–बेला चर्काे स्वरमा अश्लील शब्द बोलिरहेका थिए। बाटो काट्नका लागि पुलमा हिँडिरहेकालाई उनीहरू वास्ता गर्दैनथे। तर, देहसुखको खोजी गरिरहेका जस्तो देखिइने पुरुषहरूसँग भने उनीहरू टाँसिन्थे, ठोक्किन्थे। रेट नमिल्दा उनीहरू भद्दा शब्द बोलिरहेका हुन्थे। ‘कुरा नमिलेर’ भौँतारिरहेका ती सहचालक एक जना युवती भएतिर लागे। उनीसँगै अर्का एक जना पाको उमेरका पुरुष पनि गए। पुलको मध्यभागमा पहँेलो कुर्ता–सुरुवाल लगाएकी युवतीसँग उनीहरू गफ गर्न थाले। युवती भनिरहेकी थिइन्, ‘जाने भए मेरोमा जाऊँ, नत्र हुँदैन। एक पटकको एक जनालाई १३ सय मात्रै हो।’
सहचालकले भने, ‘बरु १५ सय दिन्छु, मेरोमा जाऊँ।’निकै बेर उनीहरूबीच ‘तेरोमा-मेरोमा’ भइरह्यो।अन्त्यमा पहेँलो कुर्तावाली युवतीले रिसाउँदै र अश्लील शब्द बोल्दै भनिन्, ‘हुँदैन भनेपछि हुँदैन। करको व्यापार गरिँदैन। जाने भए मैले भनेको ठाउँमा खुरुक्क हिँड, नत्र आफ्नो बाटो नाप।’ सहचालक र पाको पुरुष मुख रातो पारेर आफ्नो बाटो लागे।
आकाशेपुलको अर्काे कुनामा खरानी रङको टिर्सट र कालो प्यान्ट लगाएकी महिला एक जना अधबैँसेसँग बार्गेनिङ गर्दै थिइन्। एक घण्टाको १२ सय, एक रातको पाँच हजार !’ उनी भन्दै थिइन्। अधबैँसे चाहिँ ‘अलि कम गर न’ भन्दै थिए।‘कममा जानेलाई लैजानू,’ उनी भनिरहेकी थिइन्, ‘मेरो रेट त तलमाथि हुँदैन।’बसपार्कको पुलमा यौनकर्मीसँगै दलालहरूको सक्रियता पनि उत्तिकै थियो। दलालहरू ‘नजिकैको गेस्टहाउसमा केटी छन्, जाने हो?’ भन्दै पुलमा भएका मानिसलाई सोधिरहेका भेटिन्थे। उनीहरू मसिनो आवाजमा ‘जाने भए म फोन गर्दिन्छु’ भनिरहेका थिए।
साउन ३१ गते, शुक्रबार, स्थानः काठमाडौं, रत्नपार्क र सुन्धारा,समयः साँझ ७ बजे, वीर अस्पतालअगाडिको पुलमा मानिसको आवतजावत थियो। तीन जना तेस्रोलिंगी युवती ग्राहकको खोजीमा यताउति गरिरहेका देखिन्थे। उनीहरू पुलमा अलमलिने पुरुषहरूसँग ‘जाने हो’ भनिरहेका थिए। दुई जना पुरुषसँग उनीहरू गफिए। उनीहरूको संवाद यस्तो थियोः
‘जान त जाने हो, तर पुलिसको लफडा हुन्छ कि?’‘हुँदैन। डराउनैपर्दैन।’‘कति नि?’‘घण्टाको कि रातको?’‘कुरा मिल्यो भने रातको नि।’‘रातको तीन हजार एक जनालाई।’‘एक घण्टाको नि?’
‘घण्टाको १५ सय।’महँगो भयो भनेर ती दुई पुरुष तर्किए। एक जना तेस्रोलिंगी युवतीले उनीहरूलाई गाली गर्दै भनिन्, ‘सस्तो खोज्न त कालिमाटी तरकारी बजारमा जानुपर्छ।’केही बेरपछि चारपाँच जना युवतीको समूह देखियो। उनीहरू पुलको रेलिङमा अडेस लागेर उभिएका थिए। एक जना १७–१८ वर्षको किशोर उनीहरूसँग गफ गर्न थाले। जाने भए छिटो कुरा मिलाम्,’ एक जना युवती भन्दै थिइन्, ‘यहाँ अहिले प्रहरी आयो भने सोधपुछ गर्छ। पक्रिएर लैजान्छ।’
सायद कुरा मिल्यो। ती किशोर एक जना युवतीको पछि लागेर न्युरोडतिर लागे। साँझ ८ बजेसम्म वीर अस्पतालअगाडिको पुलमा ग्राहक र यौनकर्मीको बार्गेनिङको सिलसिला चलिरहेको थियो।
रत्नपार्कको पुलमा मानिसको भीड थियो। त्यहाँ दर्जनौँ यौनकर्मी महिला यताउता गरिरहेका थिए। एक जना युवती र पुरुषको संवाद सुनियो। ‘रातको हजार दिन्छु। त्योभन्दा एक सुको बढी दिन्नँ।’‘एक बोरा चामलको १३ सय पर्छ। म त मान्छे हुँ, यार !’‘काठमान्डूमा तिमी मात्रै छौ र? तिमीजस्ता हजारौँ पाइन्छन्।’‘हेर्दा त हुनेखाने नै देखिन्छौ। हजार रुपैयाँमा किचकिच गर्न लाज लाग्दैन।’उनीहरू एकअर्कासँग रिसाएर छुट्टिए। एक जना यौनकर्मीसँग कुरा गर्दा उनले अचेल आकाशेपुल ग्राहक र यौनकर्मीको बार्गेनिङ गर्ने अखडा बनेको बताइन्। ‘हामी अचेल पुल–पुलमा ग्राहक खोज्दै हिँड्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘ग्राहक पनि हामीलाई खोज्दै पुलमा आइपुग्छन्।’ उनका अनुसार अधबैँसे पुरुषहरू बढी आउँछन्। ‘भर्खरका केटाहरू त कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘बढी त पाको उमेरकै हुन्छन्। रक्सी खाएर खुट्टै टेक्न नसक्नेहरू पनि ‘जाऊँ’ भन्दै आउँछन्।’
अर्की एक जना यौनकर्मीले रेटमा किचकिच हुने बताइन्। ‘हामीले भनेको रेटको आधा पनि दिन खोज्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी एक पटकको हजार र रातभरको दुई हजार माग्छौँ। उनीहरू रातभरलाई पाँच सयमा जाऊँ भन्दै आउँछन्।’ उनका अनुसार यौनकर्मीका आ–आफ्ना समूह छन्। ‘कहिले रत्नपार्क, कहिले ठमेल, कहिले नयाँ बसपार्कतिर जान्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पुलिसले ल्याङल्याङ गर्छ।’ बसपार्क क्षेत्रका गेस्टहाउसमा पनि आफ्नो सम्पर्क भएकाले ग्राहकले बोलाउँदा जाने गरेको उनले बताइन्। ‘हाम्रो मोबाइल नम्बर उनीहरूसँग छ। ग्राहक आएको बेला बोलाउँछन्।’राति १० बजेसम्म रत्नपार्कको आकाशेपुलमा यौनकर्मीहरू यताउति गरिरहेका थिए।
साउन ३२ गते, शनिबार स्थानः नयाँ बसपार्क, गोंगबु समयः दिउँसो ३ बजे -केही प्रहरी आकाशेपुलमा रहेका सामान बेच्ने व्यापारीलाई हटाइरहेका थिए। सँगसँगै, उनीहरू केही महिलालाई पनि ‘यता बस्ने होइन’ भनेर हकारिरहेका थिए। यो क्रम चलिरहेको थियो। प्रहरी आउँदा पुलमा बाटो काट्ने मानिस मात्र हुन्थे। प्रहरी गएपछि पुलमा फेरि तमासा सुरु हुन्थ्योे।
पुलको कुना–कुनामा भद्दा मेकअप गरेका, परैसम्म गन्ध आउने अत्तर हालेका यौनकर्मीको झुण्ड देखिन्थ्यो। कुनै बेला त ग्राहक र यौनकर्मी हात हालेर चलिरहेका पनि देखिन्थे। सर्वसाधारण भन्छन्– ‘लाज लाग्छ’आकाशेपुलमा यौनकर्मी र ग्राहकबीच हुने कुराकानी र बार्गेनिङका कारण आफूलाई असहज हुने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। काठमाडौँ, कीर्तिपुर बस्ने रविन शेरचन भन्छन्, ‘आकाशेपुलमा हिँड्नै लाज लाग्छ। हरेक दिन सेक्सवर्करको तमासा हेर्नुपर्छ। गर्लफ्रेन्डसँग हुँदा त झन् अप्ठ्यारो लाग्छ। असभ्य मान्छेहरू भीडमा परेजस्तो लाग्छ। बाटो काट्न बनाइएको पुलको दुरुपयोग भइरहेको छ।’
यौनकर्मी र ग्राहकका बोली र हाउभाउले पैदलयात्रुलाई बाटो काट्नै लाजमर्दाे बनाएको बताउँछन्, काठमाडाँै, बानियाँटार बस्ने सचेत सिटौला। उनी आफ्नी बहिनी सोफियासँग पुलमुन्तिरबाट बाटो काटिरहेका थिए। उनलाई किन आकाशेपुल प्रयोग नगर्नुभएको भनेर सोध्दा उनले भने, ‘मैले त आकाशेपुलबाट बाटो काट्नै छोडिसकेँ। एक पटक बहिनीसँग पुलबाट बाटो काट्दा एक जनाले उसलाई ‘जाने हो, कति हो रेट?’ भनेर सोध्यो। त्यो दिनदेखि पुलबाट बाटै काट्न छाडिदिएँ।’
महानगरीय प्रहरी वृत्त, रानीपोखरीका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवाली प्रहरीले यस्ता क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले यस्ता क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिरहेका छौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सिभिलमा पनि हाम्रा प्रहरी परिचालित छन्।’ यौनकर्मीलाई पक्रिएर थुनामा राखे पनि छोटो समयमा छुट्ने र फेरि त्यही पेशा अँगाल्ने गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यस्तो समस्यामा प्रहरीले मात्रै केही गर्न सक्दैन।’ज्ञवालीका अनुसार सार्वजनिक स्थलमा भइरहेको यौन व्यापारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष जिम्मेवार छ। उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई पक्रिएर मात्र के गर्ने? हामीले रोजगारी दिने कुरा हुँदैन। जबसम्म अन्य रोजगारीका अवसर पाउँदैनन्, उनीहरू यही काममा लागिरहेका हुन्छन्।’ प्रहरीले पछिल्लो समयमा भने यी क्षेत्रमा निगरानी बढाइरहेको उनी बताउँछन्।
‘आकाशेपुलमा समस्या छ’डीएसपी होबिन्द्र बोगटी, प्रवक्ता, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु। नयाँ बसपार्क, रत्नपार्कलगायत क्षेत्रमा रहेका आकाशेपुलमा हुने यौन व्यवसायलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले पनि गुनासो गरेका छन्। हामी आफैँ पनि पुलमा हिँड्दा समस्या भएको देखिन्छ। आकाशेपुलमा समस्या छ। यी क्षेत्रमा हुने विकृतिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सोचले हामीले ‘क्लिन काठमाडौँ’ नामक कार्यक्रम सुरु गर्‍यौँ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत आकाशेपुलमा भइरहेको यौन व्यापार न्यूनीकरण पनि पर्छ। हामीले तीन महिनाअघि सुरु गरेको कार्यक्रममा पहिलो दिनै ८५ जनाभन्दा बढी महिला यौनकर्मी र पुरुष ग्राहकलाई समात्यौँ। रत्नपार्क र गोंगबु क्षेत्रमा रहेको आकाशेपुलबाट उनीहरू समातिएका थिए। उक्त कार्यक्रम सुरु गर्दा हामीले प्रहरीभित्रकै महिला तथा पुरुषलाई सिभिल ड्रेसमा खटाएका थियौँ। त्यो बेला महिला प्रहरी कर्मचारीलाई केटाहरूले बार्गेनिङ गरेर हातपात नै गरेको अवस्था थियो।
‘प्रहरीको भूमिका कमजोर भयो’रूपा शर्मा ‘नेहा’, अध्यक्ष, दिगो विकासका लागि सञ्चार माध्यमको परिचालन।
पछिल्लो समय संघीय संरचना परिवर्तनसँगै कतिपय बालबालिका तथा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संकाय खारेज भएका छन्। त्यसकारणले पनि अहिले यो समस्या झनै मौलाएको छ। हिजो विभिन्न संघसंस्थाले यी संकायलाई गुहार्थे, फसेका महिलालाई रेस्क्यू गर्थे। तर, अहिले त्यो अवस्था छैन। प्रहरीले भनेको ठीक हो। यौनकर्मीलाई पक्राउ गरेर लामो समयसम्म थुनामा राख्न सकिँदैन। तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन।
सबैभन्दा बढी समस्या अहिलेको संघीय संरचनाले काम नगरेका कारण भएको छ। संघीय संरचना त बन्यो, तर ती संकायहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरिरहेका छैनन्। हरेक संघीय क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रमा हुने बाल यौन हिंसा, यौन व्यापार, महिलाविरुद्ध हिंसाजस्ता कुरालाई अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ। प्रहरीले यस्तो समस्यामा आफ्नो कमजोरी देखाइरहेको छ। लुकेर यौन व्यापार गरेको भए बेग्लै कुरा, खुलेआम आकाशे पुलमा भइरहेको बार्गेनिङ उनीहरूले देखिरहेका हुन्छन्। तर, पनि आफूले लिनुपर्ने कदम नलिनु उनीहरूको कमजोरी हो। युवराज भट्टराई-सागर लामिछाने मगरले लेखेको यो इस्यु सम्पूर्ण साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो ।